नेकपा फुट्दैन, एकजुट भएर अघि बढ्छ : नेता रावल Nepalpatra
डोटी । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता डा. भीम रावलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कुनै पनि हालतमा नफुट्ने, बरु एकजुट भएर जाने बताउनुभएको छ । जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिका-२ बग्लेकमा कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा. रावलले पार्टीमा पछिल्लो समय आन्तरिक विवाद भए पनि पार्टी कुनै पनि हालतमा नफुट्ने बरु एकजुट भएर जाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीमा विवाद छ तर फुट्ने कुरा छैन, विवाद समाधान गरेर पार्टी मजबुत भएर जानेछ ।”
नेता रावलले नेकपा भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी भएकाले पार्टीमा भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई पनि कारवाही हुने बताउनुभयो । नेकपा सरकारको पालामा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्नु प्रतिपक्षको आरोप भएकाले त्यस्ता आरोपमा कुनै विश्वास नभएको उहाँको भनाइ थियो ।